Xiriirka Jaceyl Oo Dheeraada & Dhibaatooyinka laga dhaxlo | shumis.net
Home » galmada » Xiriirka Jaceyl Oo Dheeraada & Dhibaatooyinka laga dhaxlo
Xiriirka Jaceyl Oo Dheeraada & Dhibaatooyinka laga dhaxlo
Xiriirka jaceyl oo dheeraada ayaa iska leh dhibaatooyin sababta kala tag iyo waji xumo.
Inta badan hadaynu bini-aaden nahay kuma degdegno guur oo waxaynu is nidhaahnaa ka fiirsada guurka madaama uu yahay wax aan yarayn. Waxeynu door bidnaa inaan xidhiidh la samaysano ama layeelano qof aan is leenahay nolosha waad la qeybsan kartaa. HadabaXiriirka Jacaylka ee daba dheeraada ayaa la sheegay inuu leeyahay dhibaatooyin fara badan, oo ay ka mid yihin:
1.Wuxu Sababa Niyad Jab Xiriidhku kolkuu dheeraadoo oo ay laba qofood wax badan isa shukaansanayeen wuxuu bahdilaa qiimaha uu jacayku leeyahay. Isla markaasna kugu dhaliya inaad damacdo ama shukaansato qof kale, waayo waxaad is oran sheekadani waa ijiid aan ku jiidee oo meelba ma gaareysee maan danteyda ka raacdo oo katashado. Ogow shukaansigu wuxu ku dhamaada guur.
2.Wuxuu Sababa Macsi (Zino) Shaki kama taagna inuu xiriirka jaceyl markuu dheeraado oo in mudu aad u fara badan kolkay soo sheekaystaan inanku iyo inantu ineey macsi ku dhacaan. Waana caaqabadaha guurka baajiyo waayo wiilku wuxuu is oranayaa haday kol jaceylkaagi waxaad waydiisatay ay ku siisay intaadan la aqal galin, hadaba ragoo idilna way siin. Waxaa laga yaabaa in wiilku uu ka niyad jabo gacalisaduu intaas lasoo socday oo bartaas kaaga dhaqaaqo, haduu iskala kaa joogana oo kolaba aqal galena si wanaagsan oo xiisa leh kuuma eegayo.
3.Guurku Dhadhan ma Yeelanayo Xiisaha iyo macaanida la isku qabay waa kuwa inta badan ku soo dhamaaday xiligii aad isla socoteen ama aad xidhiidhku jiray.
Guurka ayaa dhadhan uleh dadka isku soo qaba lakiin labada qof ee xidhiidhkooda uu dheeraado waa kuwa aan dhadhamin farxada nolosha oo maadaama inta badan ay farxada kusoo qaateen Guurka ka hor.
Filansha waa baa laga yaabaa inuu meesha ka dhaco iyo is ciil kaanbin. Hadaan soo gabagabeeyo xiriirka dheeraada wuxuu leeyahay caqabado badan oo aan marnaba wanaagsanayn hadaan qofka aad la shakaysanaso rajo ka qabtid kolkaa waxaa haboon inaa talaabo fiic ku dhaqaaqdaan.
Title: Xiriirka Jaceyl Oo Dheeraada & Dhibaatooyinka laga dhaxlo